भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एउटा ट्वीटले विश्वभर तरङ्ग ल्याइदियो, के उनी सामाजिक सञ्जालबाट कट्दैछन् ? – अभियान पोष्ट
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एउटा ट्वीटले विश्वभर तरङ्ग ल्याइदियो, के उनी सामाजिक सञ्जालबाट कट्दैछन् ?
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार राति आठ बजेर ५६ मिनेटमा एउटा ट्वीट गरे, जसले दुनियाँलाई तरंगित पारिदिएको छ । उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सोचिराखेको छु कि यस आइतबारबाट ट्वीटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालको अकाउन्ट बन्द गरिदिऔं ।’
प्रधानमन्त्री मोदीको यो ट्वीटले अहिले विश्वभर तरंग जस्तै ल्याइदिएको छ । उनको यो बेला टवीट फलोअर्स मात्र ५ करोड ३३ लाखभन्दा बढी रहेका छन् । त्यस्तै फेसबुकमा मोदीका ४ करोड ४७ लाखभन्दा बढी फलोअर्स रहेका छन् भने इन्स्टाग्राममा ३ करोड ५२ लाख फलोअर्स रहेका छन् । त्यस्तै उनी युट्यबमा पनि कम लोकप्रिय छैनन् । उनलाई युट्युबमा ४ करोड ५१ लाख जनाले सब्सक्राइब गरेका छन् ।
यद्यपि उनले यो कदमको उद्देश्यबारे कुनै कारण खोलेका छैनन् । उनले सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट बन्द गर्नेछन् वा त्यसबाट टाढा मात्र रहनेछन् भन्ने स्पष्ट प्रतिक्रिया नआएकोले उनका विश्वभर रहेका फलोअर्सहरुले विभिन्न टिप्पणीहरु गरिरहेका छन् ।